Kuyini iphupho lejazi lesikhumba: ukukhetha, ukuthenga noma ukuthola njengesipho. I-Mink igqoke futhi ihumushe amaphupho ngaye.
Iphupho lengubo ye-mink, liyini?
Ukuchazwa kokulala lapho ukhethe noma ukugqoka imbobo yesikhumba seminki.
Abangane abangcono kakhulu bamantombazane, futhi ngenxa yalokho isipho esihle kunazo zonke, ngaphezu kwedayimane ingubo yokuboya. Noma yimuphi owesifazane uzojabula ngesipho esinjalo kumlingani noma othandekayo. Kodwa iphupho lisho ukuthini lapho ubona imbobo yesikhumba se-mink? Ibhuku lethu lephupho lizokusiza ukuthi uqonde lokhu.
Ingubo yesikhumba iphupha ngani?
Insizwa encane eyabona ukuthi ithole isipho noma ithengile lo mkhiqizo ngokwayo, izokwazi ukujwayela insizwa encane kakhulu. Kodwa, izimfanelo zakhe ezingokomoya ziyoba ziphansi kakhulu kumathuba ezezimali. Ngakho-ke, uma intombazane ilindele ubuhlobo besikhathi eside, khona-ke kuyodingeka ukhethe ukuthi uyaluxabisa yini ngaphezulu: inhlalakahle yezinto ezibonakalayo noma umphefumulo wokukhulumisana.
Indwangu yesikhumba esonakele ibonisa lesi sifo. Kodwa uma uzama izingubo futhi uzizwa usishisa kakhulu, ukuvusa isifiso sakho sokufeza inhlalakahle yezinto ezibonakalayo kukucindezela kakhulu ekuziphatheni, ukuthi uchitha kuphela izinzwa zakho, ungafinyeleli okufunayo.
Ukubheka amafasitela, agqoke izingubo zoboya, iningi lihlanjululwe ngosuku oluqhwaqisayo, lithembisa inkathi yenkathazo ezoholela ekunganeliseki wena kanye nokucindezeleka.
Ingubo ye-mink ibukeka kanjani?
Njengoba lo mkhiqizo othile ubhekwa njengokunethezeka kakhulu, kubalulekile ukuhlala ngokuningiliziwe ekuchazeni iphupho elinjalo.
Ngokuvamile, abesifazane abanjengoba babona lokhu, futhi empilweni yangempela bahlala esikhundleni esiphakeme emphakathini. Futhi ukuze ngizibone ngengubo ye-mink ithi le madodakazi maduzane kufanele enze uhambo olumnandi nomuntu othakazelisayo.
Ukubona indoda enqunu enezindwangu zokugqoka i-mink fur coat izithembisa ukuthengiswa komngane oseduze noma isihlobo.
Uma izingubo zakho eziphezulu ziqotshwa izinja, kufanele ulungiselele ukuthi uzoba yingxenye eqondile empikweni yomunye futhi kuzodingeka uthathe uhlangothi lomunye wabaphikisi, okuyokwenza ukuthi ubuhlobo bakho nomlingani bungathinteki nakanjani.
Encwadini ethi Esoteric Dream Book kuthiwa i-mink coat ebiza kakhulu ibonisa ukuchuma kanye nengcebo. Kodwa ungazigabisi ngempumelelo yakho yezezimali, njengoba lokhu kungabangela umona phakathi kwabanye futhi kuholele ukuthi izitha zizoqala ukuhlela ngokumelene nawe.
Ukugqoka imbobo yesikhumba se-mink
Ngokusho kwencwadi yephupho kaFreud ehambisana nalokhu umkhiqizo ubonisa ukuthi lowo muntu unamathele kakhulu empilweni yangempela. Umphuphi unezinkimbinkimbi eziningi nokungaqiniseki, okungamvumeli ukuba afeze imigomo ebekiwe.
Uma ugqoka isembatho sombobo, futhi uqinisa ukunyakaza kwakho ngokuqinile, kufanele ubuyekeze kakhulu indlela yakho yokuphila. Kubalulekile ukuthatha ingxenye ekhuthele kakhulu ezenzakalweni ezizungezile, ukuze ungahlali endleleni yokuphila. Kodwa ingubo, lapho ulula khona, ngokunethezeka nangenhlanhla, ithi esikhathini esizayo uzophumelela futhi uphumelele ebhizinisini.
Ukuze ubone ijazi eliphakeme, egqoke ingane noma omunye umuntu, kusho ukuthi maduzane kuyodingeka ukhulume nomuntu overestimates indima yakhe ezenzakalweni.
Ukuze ube emakhazeni futhi ugqoke imbobo yesikhumba seminyango ukuze ungafaki, uthi umphuphi uyumuntu osebenza kakhulu osukwini lwakhe. Ungashintshi ngokwakho, ngoba yilapho kugcinwa khona umlingisi ozoholela umuntu empilweni yokuphila.
Ngokusho kokuchazwa kwezincwadi zephupho, kucacile ukuthi amaphupho owathenge ngawo, olinganiselwe noma ogqoke izingubo zangaphandle ezivela ebusweni, angaba nencazelo engavamile. Ukuze uqonde kahle izimpawu ezifihliwe, zama ukukhumbula iphupho kuzo zonke imininingwane bese ukhokha ngokukhethekile ukuzwa kwakho.
Amaphupho ngoKhisimusi noNyaka Omusha: Ukuchazwa kwamaphupho
I-Aminophylline evela ku-cellulite: inganekwane noma ngokoqobo?
Inyangazonke emva kwenyanga - ingabe kufanelekile ukukhathazeka?
Farfalle nge pesto
Okuthile okuwusizo mayelana nokususwa kwezinwele emilenzeni
Shatush on izinwele ezimnyama: ngaphambi nangemva izithombe
Indlela yokuqinisa umkhuhlane wengane ekhaya?
I-Horoscope yezilinganiso zango-2011
Ukukhulelwa kwe-Ectopic nezimpawu zayo
Amafutha omquba: ukuzuza noma ukulimala?
Inyosi igcoba ku-multivark
Ukuzibophezela ngezipikili: i-manicure enhle ngonyaka wokugcina wezi-2016
Indlela yokuqalisa ukusebenza kwe-metabolism
Ukupheka kwe-Armenia: izitsha, ukudla okulula